New Link Yakawanikwa Pakati peAlzheimer's uye Immune Cell Dysfunctions
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Link Yakawanikwa Pakati peAlzheimer's uye Immune Cell Dysfunctions
Kudzidza zvikonzero zvakaoma zvehosha yeAlzheimer, uye nzira yekurapa nekudzivirira chirwere ichi, kwakafanana nekugadzirisa chidimbu chepuzzle, masayendisiti ega ega achibata chikamu chidiki, asina chokwadi chekuti chingapinda sei mumufananidzo mukuru. Ikozvino, vaongorori veGladstone Institutes vaona kuti mashoma eaimbova asina kubatana epuzzle zvikamu anobatana sei.
Muchidzidzo chakaburitswa mujenari iScience, timu inoratidza kuti zvinyoro nyoro chiitiko chepfari chinokurudzira kuzvimba kwehuropi zvisina kujairika mumakonzo ekutevedzera zvakakosha zvechirwere cheAlzheimer. Masayendisiti anoratidza kuti vatambi vakawanda vanozivikanwa muchirwere cheAlzheimer vanokodzera mukubatana uku kunonakidza pakati pehurongwa hwemitsipa uye immune system, kusanganisira protein tau, inowanzokanganiswa uye yakaunganidzwa muhuropi hunorwara, uye TREM2, genetic ngozi yechirwere.
"Zvatinowana zvinoratidza nzira dzekudzivirira uye kudzoreredza kusarongeka kwakabatana neAlzheimer mune ese ari maviri network network uye immune system," anodaro Lennart Mucke, MD, director weGladstone Institute of Neurological Disease uye munyori mukuru wechidzidzo chitsva. "Kupindira uku kunogona kuderedza zviratidzo zvechirwere uye kungatobatsira kugadzirisa chirwere."
Kubatanidza Epileptic Basa uye Brain Inflammation
Masayendisiti akaziva kwenguva yakati kuti chirwere cheAlzheimer chakabatana nekuzvimba kusingaperi muuropi. Mutyairi wekuzvimba uku anoita kunge kuunganidzwa kweamyloid mapuroteni muchimiro che "plaques," chiratidzo cheuropathological chechirwere.
Muchidzidzo chitsva ichi, vaongorori vakaratidza kusabatwa kwepfari semumwe mutyairi akakosha wekuzvimba kwehuropi mumhando yeAlzheimer's-inoenderana nembeva. Iyi yakavanzika yerudzi rwepfari inoitikawo muchikamu chikuru chevanhu vane chirwere cheAlzheimer uye inogona kuve chirevo chekukurumidza kuderera kwekuziva muvarwere.
"Imwe nzira iyi subclinical pfari inogona kukurumidza kuderera ndeyekusimudzira kuzvimba kwehuropi," anodaro Melanie Das, PhD, sainzi muboka raMucke uye munyori anotungamira webepa. "Takafara kuwana mapindiro maviri ekurapa akadzvinyirira chiitiko chepfari uye kuzvimba kwehuropi."
Mumuenzaniso wembeva, masayendisiti akadzivirira zvose zvisiri izvo nekushandisa genetic engineering kubvisa protein tau, iyo inosimudzira neuronal hyperexcitability (kupfurwa kwemaneuroni akawanda panguva imwe chete). Vakakwanisawo kushandura shanduko kune neural network uye immune masero, pamwe muchikamu, nekurapa mbeva neanti-epileptic drug levetiracetam.
Chiyedzo chekiriniki chechangobva kuitika chelevetiracetam chakabuda kubva kubasa rekare raMucke chakaratidza mabhenefiti ekuziva muvarwere vane chirwere cheAlzheimer uye subclinical epileptic chiitiko, uye tau-kuderedza therapeutics iri kuvandudzwa, zvakare ichivaka patsvagiridzo muMucke's lab. Chidzidzo chitsva ichi chinosimbisa kuti marapirwo aya angave akavimbiswa sei kuvanhu vari mukutanga kwechirwere cheAlzheimer.
Novel Basa reImpact Alzheimer's Risk Gene
Kuzvimba hakuna kufanana; inogona kutyaira chirwere, sezvinoitika mumamiriro ezvinhu akaita serheumatoid arthritis, kana inogona kubatsira muviri kupora, somuenzaniso, mushure mekucheka.
"Zvakakosha kusiyanisa kana chirwere cheAlzheimer chinokonzera kuzvimba kwakanyanya kwakashata, kukundikana kwekuputika kwakanaka, kana zvose zviri zviviri," anodaro Mucke, uyo ariwo Joseph B. Martin Purofesa Akakurumbira weNeuroscience uye purofesa wezvetsinga paUC San Francisco. "Tichitarisa mabatirwo emasero ekuzvimba muuropi haakurumidzi kukuudza kana activation yacho yakanaka kana yakaipa, saka takafunga kuenderera mberi."
Mucke nevamwe vake vakaona kuti, pavakadzikisa pfari muuropi hwembeva, chimwe chezvinhu zvinokonzeresa zvakanyanya kubatwa yaive TREM2, inogadzirwa nemicroglia, masero ehuropi anogara edziviriro. Vanhu vane mavara akasiyana eTREM2 vane mukana wakapetwa kaviri kana kana wekuita chirwere cheAlzheimer pane vanhu vane TREM2 yakajairwa, asi masayendisiti achiri kuyedza kududzira basa chairo rinoitwa nemorekuru uyu muhutano nechirwere.
Masayendisiti akatanga kuratidza kuti TREM2 yakawedzera muhuropi hwemakonzo ane amyloid plaques, asi yakaderedzwa mushure mekudzvinyirirwa kwebasa ravo repfari. Kuti vazive kuti sei, vakaongorora kana TREM2 ichikanganisa kubatwa kwemakonzo kusvika kudiki dosi remushonga unogona kukonzera pfari. Mbeva dzine mazinga akaderedzwa eTREM2 airatidza basa repfari mukupindura mushonga uyu kupfuura mbeva dzine zvakajairika TREM2 mazinga, zvichiratidza kuti TREM2 inobatsira microglia kudzvanya maitiro asina kujairika neuronal.
"Iri basa reTREM2 rakanga risingatarisirwi uye rinoratidza kuti kuwedzera kweTREM2 muuropi kunogona kuita chinangwa chinobatsira," anodaro Das. "TREM2 yakanyanyodzidzwa zvine chekuita nemararamiro echirwere cheAlzheimer senge plaques uye tangles. Pano, takaona kuti molekuru iyi zvakare ine basa mukudzora neural network mabasa.
"Magetsi akasiyana eTREM2 anowedzera njodzi yechirwere cheAlzheimer anoita seanokanganisa basa rayo," anowedzera Mucke. "Kana TREM2 ikasashanda nemazvo, zvinogona kuomera maseru edziviriro kudzvanya neuronal hyperexcitability, izvo zvinogona kubatsira mukukura kwechirwere cheAlzheimer uye nekukurumidza kuderera kwekuziva."
Makambani akawanda emishonga ari kugadzira masoja ekudzivirira chirwere uye mamwe makomisheni ekusimudzira basa reTREM2, kunyanya kusimudzira kubviswa kwemaamyloid plaques. Sekureva kwaMucke, marapirwo akadai anogonawo kubatsira kudzvanya zvisina kujairika network chiitiko muAlzheimer's chirwere uye zvinoenderana nemamiriro ezvinhu.